Lucky Racing Slot - Myanmar Online Game
ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Slot ကစားနည်းလေးကတော့ ကားပြိုင်ပွဲတွေအပေါ်မှာအဓိကအခြေခံထားပြီးတော့ တစ်ကယ်ကို ကိုယ်တိုင်ပြိုင်နေရသလိုမျိုး Slot လှည့်နေရင်းနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် Slot လေးတစ်ခုပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ Lucky Racing ပါတဲ့။ Payline ကအရမ်းကိုရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ Payline9line စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာနော်!
Payline နည်းတယ်ဆိုပြီး ပြန်ရနှုန်းကိုတော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ အများဆုံး 10000X အထိတောင်ရနိုင်တာဗျို့! ဒါကြောင့် ပြိုင်ကားရောင်စုံလေးတွေနဲ့ အကွက်ရွှေ့ဖို့အတွက် ဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ဗျ။
ဒီကစားနည်းရဲ့အရမ်းကို ထူးခြားတဲ့ Main Feature ကတော့ Reel5ခု Row3ခုဖြစ်ပေမယ့်လဲ Payline ကို9ခုထဲအသုံးပြုထားတာပါ။ Slot ချစ်သူတွေသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီလို Payline ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ Slot တွေကရှားသွားပြီးတော့ ရှိရင်လဲ Pay နှုန်းအတော်လေးနည်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Lucky Racing မှာတော့ Payline9line ထဲနဲ့တင်ပဲ အတော်လေးကို ဆော့လို့ကောင်းပြီး ပေးနှုန်းလဲများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Slot ရဲ့အပြင်အဆင်ကလဲ ကားပြိုင်ပွဲကွင်း Racetrack အပေါ်မှာ ဝါစိမ်းနီ မီးပွိုင့် စနစ်တွေနဲ့ အတူ ပြိုင်ပွဲကွင်းမှာ Sexy ဆန်ဆန် ကောင်းမလေးတို့နဲ့ ဖန်တီးထားတာကြောင့် အရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အငွေ့အသက်တွေကိုခံစားရမှာအသေအချာပဲနော်!
Symbol တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်။ Reel5ခု Row3ခု Slot တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် Symbol တွေကိုများများလေးထည့်ပေးထားပြီးတော့ Special Symbol နဲ့ ရိုးရိုး Symbol ခွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ရိုးရိုး Symbol မှာတော့ ဖဲချပ် Symbol တွေဖြစ်တဲ့ A, K, Q, J, 10 တို့ကိုတွေ့ရပြီးတော့ သူတို့ထဲမှာမှ အနည်းဆုံးက J, 10 တို့ဖြစ်ပါတယ်။ J နဲ့ 10 တို့က3ခုတူရင် 3,4ခုတူရင် 10,5ခုတူရင် 50 စီပြန်ပေးကြပါတယ်။ ဒုတိယအများဆုံးက ဘုရင်နဲ့ ဘုရင်မကြီးတို့ ဖြစ်တဲ့ K, Q တို့ဖြစ်ပြီးတော့3ခုတူရင် 5,4ခုတူရင် 25,5ခုတူရင် 180 စီပြန်ပေးကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ Ace ဖြစ်တဲ့ A ကတော့3ခုတူရင် 10,4ခုတူရင် 50,5ခုတူရင် 300 စီပြန်ပေးကြပါတယ်။
Special Symbol တွေကိုတော့ ဒီ Slot ရဲ့ အဓိက Theme ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ကားတွေအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးခရမ်းရောင် ပြိုင်ကားက3ခုတူရင် 15,4ခုတူရင် 100,5ခုတူရင် 500 ၊ အစိမ်းရောင်ပြိုင်ကားက3ခုတူရင် 20,4ခုတူရင် 125,5ခုတူရင် 800၊ ရွှေဝါရောင်ပြိုင်ကားက3ခုတူရင် 25,4ခုတူရင် 150,5ခုတူရင် 1000 စီပြန်ပေးကြပါတယ်။ အများဆုံးပြန်ပေးတဲ့ နောက်ဆုံးကား ၂ စီးမှာ ဘာထူးခြားလဲဆိုရင်တော့ ပေးနှုန်းကလဲ အရမ်းကိုရင်ခုန်ဖို့ကောင်းသလိုပဲ အနည်းဆုံး2ခုကျတာနဲ့ အနိုင်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒုတိယပေးနှုန်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ကားအပြာလေးက2ခုတူရင် 5,3ခုတူရင် 30,4ခုတူရင် 250,5ခုတူရင် 5000၊ နောက်ဆုံးနဲ့ ပေးနှုန်းအများဆုံး အနီရောင်ပြိုင်ကားလေးက2ခုတူရင် 15,3ခုတူရင် 60,4ခုတူရင် 500,5ခုတူရင် 10000 အထိတောင်ပြန်ပေးမှာနော်!
အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေမယ့် Sexy ဆန်ဆန်ကောင်မလေးကတော့ Wild Symbol နေရာကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Wild ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကျရင်ကျတဲ့နေရာမှာ အစားထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဖဲကစားနည်းမှာဆိုရင် Joker လိုပဲပေါ့။ သူက Reel 2, 3,4တို့မှာပဲပေါ်တာပါ။ Free Spin Bonus Symbol ကိုတော့ ပြိုင်ပွဲအလံအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ သူက3ခုတူရင် 5,4ခုတူရင် 10,5ခုတူရင် 100 တို့လောင်းကြေးနဲ့မြှောက်ပြီးပြန်ရတဲ့အပြင် Free Spin တွေလဲသယ်ဆောင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံ3းခုစပြီးကျတာနဲ့ Free Game တစ်ခုကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Free Game မှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပြိုင်ကားတစ်စီးကိုရွေးပြီးတော့ Multiplyer 2x ကနေ 9x ၊ Free Spin 5ခါ ကနေ အခါ 20 အထိကံစမ်းရမှာနော်! Free Spin လှည့်နေရင်းနဲ့လဲ Free Spin Bonus Symbol ထပ်ကျလာနိုင်ပြီးတော့ Free Spin တွေထပ်ပေါင်းထည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးပေါင်းထည့်နိုင်တဲ Free Spin အရေအတွက်ကတော့ 60 အထိပါ။
ကဲ.. ဒါဆိုရင် ကားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ ကားပြိုင်နေရသလို ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Feeling တွေဖို့အတွက် Payline9ခုနဲ့ Lucky Racing ကိုကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? အခုပဲ JDBYG ကိုလှမ်းခဲ့လိုက်ပါ!
February 7, 2020 5:43 am
I truly enjoy looking at on this website , it contains excellent articles. “It is easy to be nice, even to an enemy – from lack of character.” by Dag Hammarskjld.